चन्द्रमाको ‘डार्क साइड’मा आखिर के छ ? | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि चन्द्रमाको ‘डार्क साइड’मा आखिर के छ ?
on: १६ बैशाख २०७६, सोमबार ०७:१७ प्रविधि
हामीहरू चन्द्रमा हेर्दा सधैं एकै भाग मात्र देख्ने गर्छौं, अर्थात् पृथ्वीबाट चन्द्रमाको आधा एउटै भाग मात्र देखिन्छ । चन्द्रमाको नदेखिने आधा भागको विषयमा भने धेरै जानकारी पाउन सकिएको छैन । यहाँ चन्द्रमाको तिनै भागबारै संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ :
सन् १९५९ मा सोभियत विमान लुना ३ लाई नदेखिने भागको तस्वीरका लागि चन्द्रमा पठाइएको थियो । यसले केही तस्वीर लिएको पनि थियो । त्यतिबेला मानिसले पहिलोपटक नदेखिने भागको तस्वीर हेर्न पाएका थिए । पृथ्वीको परिक्रमा गर्दा चन्द्रमाको दुवैतर्फको भाग देख्न कठिनाइ हुन्छ । यी दुईको बीचको गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभावले उत्पन्न बलको प्रभावमा यी दुई ग्रह घुम्न थाल्छन् । तर चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न जति समय लगाउँछ, त्यति नै समय उसले आफ्नो कक्षमा एक फन्को लगाउन लगाउँछ, जसको कारण चन्द्रमाको अर्को भाग पृथ्वीबाट देख्न सकिँदैन ।
चन्द्रमाको देखिने भागपट्टि भने धेरै नै अनुसन्धान भएका छन् । किनकि यसलाई सहजै देख्न पनि सकिन्छ । चन्द्रमाको नदेखिने भागलाई ‘डार्क साइड’ पनि भन्ने गरिन्छ । तर चन्द्रमाको दुवैतर्फ पृथ्वीमा जस्तै दिन र रात हुन्छ । चन्द्रमाको नदेखिने भागको विषयमा पनि विभिन्न अध्ययन चलिरहेको छ । यसैबीच चीनको चाङ ई–४ ले यसबारे विभिन्न सूचना दिने काम गरिरहेको छ । चन्द्रमाको नदेखिने भागमा पहिलोपटक यो विमान अवतरण गरेर अनुसन्धान शुरू गरेको हो ।
चीनको यो अनुसन्धानले आगामी दिनमा चन्द्रमाको विषयमा जान्न बाँकी धेरै रहस्य बाहिर ल्याउनेछ । साथै यसले चन्द्रमाको माटोको पनि परीक्षण गर्नेछ । चाङ ई–४ ले उक्त ‘डार्क साइड’ भनिएको भागको रोचक सूचना पठाएको चीनले बताएको छ । केही समयअघि यो मिशनअन्तर्गत चीनले चन्द्रमामा कपासको बीउ उमारेको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो क्षेत्रमा रेडियो सिग्नल पनि निकै कम हुने गरेको छ । तर अहिले चीनले पठाएको योजनाअनुसारको विमानले कम फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्न सक्ने भएकाले केही थप रहस्य उजागर हुने विश्वास चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको छ ।
चीनको उक्त मिशनले मानव बसोवासको सम्भावनाको विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछ । चिनियाँ वैज्ञानिकहरू अहिले मंगल ग्रहमा मानव सम्भावनाको खोजीका लागि चन्द्रमाको स्रोतको प्रयोग गर्ने योजनामा छन् । त्यसको एक पाटोको रूपमा पानीलाई लिन सकिन्छ । सन् २००९ मा चन्द्रमाको उत्तरी र दक्षिण ध्रुवमा नासाले पानी फेला पारेको थियो । त्यसलाई हाइड्रोजन र अक्जिनमा परिणत गरी श्वास–प्रश्वासको व्यवस्था गर्न सकिने बताइएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरू अहिले चन्द्रमाको कहिल्यै पनि घाम नलाग्ने स्थानको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छन् । (एजेन्सी)
चन्द्रमामा चिनियाँ यान सफलतापूर्वक अवतरण
२० पुष २०७५, शुक्रबार ०६:४९